महरालाई बाबुरामले भने – जे हुनु भैगयो, अब बृहद सामाजिक र राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित होऔं | Ratopati
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा आफ्नो पूर्व अनुमान अनुसार नै फैसला आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जबरजस्ती करणी प्रयासको मुद्दामा महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि डा. भट्टराईले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा महराको मुद्दा कानूनी नभएर नैतिक भएकाले बताए ।
उनले खेका छन्, ‘महराको मुद्दा कानूनी नभएर नैतिक हो भन्ने मेरो अनुमान अनुरूप नै फैसला आएछ । शायद सत्य त्यही हो । मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी जो भनिन्छ ।’
यद्यपि सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्ति निजी जीवनमा पनि सतर्क हुनुपर्ने भन्दै अब राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
महराको मुद्दा कानूनी नभएर नैतिक हो भन्ने मेरो अनुमान अनुरूप नै फैसला आएछ! शायद सत्य त्यही हो!मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी जो भनिन्छ! तैपनि सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्ति निजी जीवनमा पनि सतर्क रहनैपर्छ!जे हुनु भैगयो! अब बृहद सामाजिक/राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित होऔं! https://t.co/3pFycAQ4Hv
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 17, 2020
महराका पूवसहकर्मी समेत रहेका भट्टराईले अगाडि भने, ‘तैपनि सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्ति निजी जीवनमा पनि सतर्क रहनैपर्छ । जे हुनु भैगयो । अब बृहद सामाजिक र राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित होऔं ।’ केही समय अघि भट्टराई महरालाई भेट्न दिल्लीबजार कारागारसमेत पुगेका थिए ।
महरामाथि १२ असोजको साँझ संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोग लागेको थियो । सोही आरोपमा महरा १९ असोजमा पक्राउ परेका थिए । उनी १०३ दिनको कारागार बासपछि आज रिहा भएका थिए ।